၂၀၁၈ တတိယသုံးလပတ်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံး စမတ်ဖုန်း ၁၀ လုံး
15 Oct 2018 . 3:35 PM
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်၊ စက်တင်ဘာ ၃ လပတ်လုံး ဖုန်းအထွက်ကြမ်းနေတာဆိုတော့ ဘယ်ဖုန်းစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးလည်း ပြောရခက်ပါတယ်။ အရင်လတွေကလည်း Galaxy Note9နဲ့ iPhone အသစ်မိတ်ဆက်ထားတယ်၊ ဒီလထဲမှာလည်း Razer Phone2နဲ့ Google Pixel ဖုန်း၊ ဒါပြီးရင်လာဦးမယ် Flagship Killer ကနေတကယ့် Flagship ဖုန်းဖြစ်လာတော့မယ့် OnePlus 6T၊ နောက်ပြီး မနက်ဖြန်ဆိုရင်ပဲ မိတ်ဆက်လာတော့မယ့် Mate 20 Pro ကျန်သေးတာဆိုတော့ အခုချိန် လူကြိုက်အများဆုံး စမတ်ဖုန်း ၁၀ လုံးကဘာတွေပါလဲ?
Samsung vs Huawei vs Xiaomi
ဒီလို ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ Flagship ဖုန်းတွေပဲ ထွက်နေလို့ Samsung နဲ့ iPhone တို့ ဗိုလ်စွဲမယ်မှတ်တယ်၊ နံပတ် ၁ နေရာမှာ Xiaomi က Redmi6Pro နဲ့ ဦးဆောင်နေတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ Flagship Killer စမတ်ဖုန်းအသစ် Pocophone F1။ ဒါဆိုရင်တော့ Top List ၂ နေရာကို Xiaomi သိမ်းပိုက်ထားတယ် ပြောရမယ်ပေါ့။ ဒီဖုန်း ၂ လုံးက လူကြိုက်လည်းများသလို ဈေးကွက်ဝယ်လိုအားလည်း အများဆုံးတဲ့ဗျာ၊ အားကျစရာ Xiaomi Fans တွေ။
သူတို့နောက်က အမီလိုက်နေတာ ဘယ်သူဖြစ်မယ်ထင်လဲ၊ လောလောလတ်လတ် ကင်မရာ ၃ လုံးနဲ့ ကြေညာထားတဲ့ Galaxy A7 (2018)၊ တရုတ်မှာ Trump နဲ့ စစ်ခင်းနေတာဆိုတော့ iPhone လေးတွေ တစ်နေရာမှ ရမသွားခဲ့ဘူး၊ ကြေကွဲစရာပေါ့နော်။
ဒီအစား Samsung ဂွင်တည့်သွားတယ် ပြောရမလား စတုတ္ထနေရာကိုလည်း ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက Popular ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Galaxy S8 နဲ့ နေရာယူထားတယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး S8 က လူကြိုက်များနေသလဲ မပြောတတ်ပေမယ့် သူ့ထက်ကြမ်းတဲ့ ဖုန်းတွေဆက်တိုက်ထွက်နေတာတောင် ဗိုလ်ကျနေတုန်းလို့ ပြောရမယ်ပေါ့နော်။
ဒီနောက်မှာတော့ လက်ရှိစမတ်ဖုန်းလောကကို ဦးဆောင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ HMD Global ရဲ့ Nokia 7.1၊ အောက်တိုဘာလထဲ မိတ်ဆက်မယ်ကြေညာထားသလို ကျောဘက် Dual Camera ထဲမှာ Samsung လို Dual Pixel နည်းပညာပါလာမယ်၊ ဒီလိုသာဆိုရင်တော့ ကင်မရာကောင်းတယ် ပြောရမယ်ပေါ့၊ f/1.8 12MP သုံးထားတာဆိုတော့ Official ထွက်လာမှ ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ ဆက်ကြည့်ရမယ်။
နံပတ် ၆ နေရာထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ စမတ်ဖုန်းအသစ်က စက်တင်ဘာလထဲ မိတ်ဆက်ထားတဲ့ Honor 8X ၊ Kirin 710 SoC ၊ 20MP ကင်မရာနဲ့ ပွဲထုတ်ထားတဲ့ Honor စမတ်ဖုန်းသစ်က Mid-range တန်းမှာ Popular ဖြစ်နေတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ SD 660 Processor နဲ့ မိတ်ဆက်ထားတဲ့ Mid-ranger OPPO Realme2Pro။
7. OPPO Realme2Pro
နံပတ် ၉ လူကြိုက်အများဆုံး စမတ်ဖုန်းနေရာကိုလည်း Redmi Note5Pro နဲ့ ပိုင်ဆိုင်ထားသေးတာမလို့ ဘယ်လိုစမတ်ဖုန်းအသစ်တွေပဲထွက်နေထွက်နေ Xiaomi အကြိုက်များကြတယ်ထင်ပါတယ်။
သူ့နောက်မှာတော့ အကောင်းဆုံး Gaming Phone လို့ ချီးမွမ်းခံနေရတဲ့ Razer Phone2၊ ထွက်ထားမကြာသေးသလို လက်ရှိ Reviews & Rating အရ အပေါင်းလက္ခဏာပြနေတယ်။၊ ဒီိလိုသာဆိုရင်တော့ ဒီဇိုင်းပုံစံခပ်တုံးတုံးနဲ့ ပွဲထွက်ထားတယ်ဆိုမယ့် Improve ဖြစ်လာတဲ့အချက်တွေကြောင့် လူကြိုက်များနေတာလို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
နံပတ် ၁၀ နေရာမှာတော့ MA2Lite (Redmi6Pro) နဲ့ Xiaomi သိမ်းပိုက်ထားပြန်သေးလို့ Notch စမတ်ဖုန်းတွေက လွမ်းမိုးနေဆဲပါပဲလား?
10. Mi A2 Lite
ဒီကြားထဲ Popular ဖြစ်နေတဲ့ Pixel3နဲ့ Pixel3XL တို့ကလည်း Top 10 စာရင်းထဲပါမလာခဲ့သလို ကင်မရာ ၄ လုံးသုံးထားမယ့်ဆိုတဲ့ Galaxy A9 (2018) ဖုန်းတွေက လူစိတ်ဝင်စားနည်းခဲ့တယ်ဆိုရပါမယ်။
၂၀၁၈ တတိယသုံးလပတျရဲ့ စိတျဝငျစားမှုအမြားဆုံး စမတျဖုနျး ၁၀ လုံး
ပွီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုငျ၊ သွဂုတျ၊ စကျတငျဘာ ၃ လပတျလုံး ဖုနျးအထှကျကွမျးနတောဆိုတော့ ဘယျဖုနျးစိတျဝငျစားမှုအမြားဆုံးလညျး ပွောရခကျပါတယျ။ အရငျလတှကေလညျး Galaxy Note9နဲ့ iPhone အသဈမိတျဆကျထားတယျ၊ ဒီလထဲမှာလညျး Razer Phone2နဲ့ Google Pixel ဖုနျး၊ ဒါပွီးရငျလာဦးမယျ Flagship Killer ကနတေကယျ့ Flagship ဖုနျးဖွဈလာတော့မယျ့ OnePlus 6T၊ နောကျပွီး မနကျဖွနျဆိုရငျပဲ မိတျဆကျလာတော့မယျ့ Mate 20 Pro ကနျြသေးတာဆိုတော့ အခုခြိနျ လူကွိုကျအမြားဆုံး စမတျဖုနျး ၁၀ လုံးကဘာတှပေါလဲ?
ဒီလို ဒိတျဒိတျကွဲ Flagship ဖုနျးတှပေဲ ထှကျနလေို့ Samsung နဲ့ iPhone တို့ ဗိုလျစှဲမယျမှတျတယျ၊ နံပတျ ၁ နရောမှာ Xiaomi က Redmi6Pro နဲ့ ဦးဆောငျနတေယျ။
သူ့နောကျမှာတော့ Flagship Killer စမတျဖုနျးအသဈ Pocophone F1။ ဒါဆိုရငျတော့ Top List ၂ နရောကို Xiaomi သိမျးပိုကျထားတယျ ပွောရမယျပေါ့။ ဒီဖုနျး ၂ လုံးက လူကွိုကျလညျးမြားသလို ဈေးကှကျဝယျလိုအားလညျး အမြားဆုံးတဲ့ဗြာ၊ အားကစြရာ Xiaomi Fans တှေ။
သူတို့နောကျက အမီလိုကျနတော ဘယျသူဖွဈမယျထငျလဲ၊ လောလောလတျလတျ ကငျမရာ ၃ လုံးနဲ့ ကွညောထားတဲ့ Galaxy A7 (2018)၊ တရုတျမှာ Trump နဲ့ စဈခငျးနတောဆိုတော့ iPhone လေးတှေ တဈနရောမှ ရမသှားခဲ့ဘူး၊ ကွကှေဲစရာပေါ့နျော။
ဒီအစား Samsung ဂှငျတညျ့သှားတယျ ပွောရမလား စတုတ်ထနရောကိုလညျး ပွီးခဲ့တဲ့နှဈတုနျးက Popular ဖွဈခဲ့တဲ့ Galaxy S8 နဲ့ နရောယူထားတယျ၊ ဘယျလိုလုပျပွီး S8 က လူကွိုကျမြားနသေလဲ မပွောတတျပမေယျ့ သူ့ထကျကွမျးတဲ့ ဖုနျးတှဆေကျတိုကျထှကျနတောတောငျ ဗိုလျကနြတေုနျးလို့ ပွောရမယျပေါ့နျော။
ဒီနောကျမှာတော့ လကျရှိစမတျဖုနျးလောကကို ဦးဆောငျနပေါတယျဆိုတဲ့ HMD Global ရဲ့ Nokia 7.1၊ အောကျတိုဘာလထဲ မိတျဆကျမယျကွညောထားသလို ကြောဘကျ Dual Camera ထဲမှာ Samsung လို Dual Pixel နညျးပညာပါလာမယျ၊ ဒီလိုသာဆိုရငျတော့ ကငျမရာကောငျးတယျ ပွောရမယျပေါ့၊ f/1.8 12MP သုံးထားတာဆိုတော့ Official ထှကျလာမှ ဘယျလောကျကောငျးမလဲ ဆကျကွညျ့ရမယျ။
နံပတျ ၆ နရောထဲဝငျရောကျလာတဲ့ စမတျဖုနျးအသဈက စကျတငျဘာလထဲ မိတျဆကျထားတဲ့ Honor 8X ၊ Kirin 710 SoC ၊ 20MP ကငျမရာနဲ့ ပှဲထုတျထားတဲ့ Honor စမတျဖုနျးသဈက Mid-range တနျးမှာ Popular ဖွဈနတေယျ။
သူ့နောကျမှာတော့ SD 660 Processor နဲ့ မိတျဆကျထားတဲ့ Mid-ranger OPPO Realme2Pro။
နံပတျ ၉ လူကွိုကျအမြားဆုံး စမတျဖုနျးနရောကိုလညျး Redmi Note5Pro နဲ့ ပိုငျဆိုငျထားသေးတာမလို့ ဘယျလိုစမတျဖုနျးအသဈတှပေဲထှကျနထှေကျနေ Xiaomi အကွိုကျမြားကွတယျထငျပါတယျ။
သူ့နောကျမှာတော့ အကောငျးဆုံး Gaming Phone လို့ ခြီးမှမျးခံနရေတဲ့ Razer Phone2၊ ထှကျထားမကွာသေးသလို လကျရှိ Reviews & Rating အရ အပေါငျးလက်ခဏာပွနတေယျ။၊ ဒီလိုသာဆိုရငျတော့ ဒီဇိုငျးပုံစံခပျတုံးတုံးနဲ့ ပှဲထှကျထားတယျဆိုမယျ့ Improve ဖွဈလာတဲ့အခကျြတှကွေောငျ့ လူကွိုကျမြားနတောလို့ ခနျ့မှနျးရပါတယျ။
နံပတျ ၁၀ နရောမှာတော့ MA2Lite (Redmi6Pro) နဲ့ Xiaomi သိမျးပိုကျထားပွနျသေးလို့ Notch စမတျဖုနျးတှကေ လှမျးမိုးနဆေဲပါပဲလား?
ဒီကွားထဲ Popular ဖွဈနတေဲ့ Pixel3နဲ့ Pixel3XL တို့ကလညျး Top 10 စာရငျးထဲပါမလာခဲ့သလို ကငျမရာ ၄ လုံးသုံးထားမယျ့ဆိုတဲ့ Galaxy A9 (2018) ဖုနျးတှကေ လူစိတျဝငျစားနညျးခဲ့တယျဆိုရပါမယျ။